Meanings of I I I ask you I beg to differ I beg your pardon I don`t mind if I do I don’t have time I have time i o u I promise you I-beam I.A.E.A i.d i.e i.e.; I.O.U i.q I; they; etc can`t wait for sth/tdsth iaa iaea
You are here: Pyidaungsu Myanmar Mini-Encyclopedia / I
"I" to "iaea"
I, I, I, ask, you, I, beg, to, differ, I, beg, your, pardon, I, don`t, mind, if, I, do, I, don’t, have, time, I, have, time, i, o, u, I, promise, you, I-beam, I.A.E.A, i.d, i.e, i.e.;, I.O.U, i.q, I;, they;, etc, can`t, wait, for, sth/tdsth, iaa, iaea, တို့၏ အဓိပ္ပါယ်များကို တိုင်းရင်းသား ဘာသာ အမျိုးမျိုးဖြင့် အောက်တွင် ဖော်ပြထား ပါသည်။
Results 1 - 20 of 4422
ပိုးကရင်/Pwo Kayinယဝ့ၫဒၪ; ယၧၩ; [ယၧၩ T.P.] (ယ)
ချင်း/Chin(ကြိယာ) thawh; tthangh
မွန်/Mon(ကြိယာ)t.(-rr-) လ႐ုကၱဳဪခ်ှဒရာင္ကႜဳင္၊ ေကႜာန္တုိန္ေကႜံစိုတ္လြှပရာတုိန္။
ရှမ်း/Shan[ဢႆႇင်] ၵဝ်၊ ၵဝ်ၶႃႈ၊ ၶႃႈ၊ ၶႃႈၸဝ်ႈ၊ တူၶႃႈ။
မီဇိုချင်း/Mizo(ai); pron. ka; kei.
ပါဠိ/Paliahaṃ. (nom. sing. of amha)
`I ask you` (idiom) # မေးစမ်းပါရစေ (ကြားဖူး ရဲ့လား…)။
`I beg to differ` (idiom) # (သဘောအယူအဆချင်း မတူကြောင်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောရာတွင်သုံးသောစကား)။
`I beg your pardon` (idiom) # တစ်ဆိတ်လောက်။ တစ်ဆိတ်လောက်ထပ်ပြောပါဦး။(မခံမရပ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသော စကား)။
`I don`t mind if I do` (idiom) # လက်ခံကြောင်းပြရာ၌သုံးသည့်စကား။ ကောင်းသားပဲ။ ရပါတယ်။ မေတ္တာရပ်ခံရာ၌ဖြစ်စေ၊သဘောတူညီမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရာ၌ဖြစ်စေသုံးသည့်စကား။ ကျေးဇူးပြု၍။ ကောင်းပါပြီ။ လက်မခံနိုင်ကြောင်းယဉ်ကျေးစွာငြင်းပယ်သည့်အခါ၌သုံး
အခါ/Akhangahf ahf yahmv mahxv jyahxf
အခါ/Akhangahf ahf yahmv jyahxf mah
မီဇိုချင်း/Mizo(ai aw iu); n. I owe you kaihtawi; ‘i ta ka ba e’ tihna.
`I promise you` (idiom) # စိတ်ချပါ။ တကယ်ပါ။
(‌ဆောက်လုပ်ရေး) အတန်း ( အိုင် )ပုံသဏ္ဍာန်ရှိ ၊ [girder] havingacross [section] [resembling] the letter `I`
ကုလသမ္မဂ၏ အဏုမြူ အားအင်ထိန်းချုပ် ဧဂျင်စီ ၊ the United Nations agency [concern]ed with [atomic] energy (ကြောင်းတူသံကွဲ) International Atomic Energy Agency
တပ်ဆင်ထားသူ မည်သူ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ပြသော ကဒ်ပြား ၊acard or [badge] used to [identify] the [bearer
ဒီလိုဆိုလိုခြင်း ၊ ဟူ၍ ၊ that is to say; in other words
ရှမ်း/Shan[ဢိတ်ႉဢႅတ်ႉၸ်ထ်] ၶႂ်ႈဝႃႈ \_ ပွင်ႇဝႃႈ။
i.e.; that is ဟူ၍၊
ချင်း/Chin(နာမ်) `I owe you`atawinak in ttial; `kan bat` tinak.
သူတဦး၏ အသိညာဏ်ကို စစ်၍ပြသသော အညွှန်း ၊a[measure] ofaperson`s intelligence as [indicate]d by an [intelligence] test
I; they; etc can`t wait for sth/tdsth
`I; they; etc can`t wait for sth/tdsth` (idiom) # မစောင့်နိုင်၊မအောင့်နိုင်ဖြစ်သည်။
သစ်ပင်၏ ပင်စည်တိုင်နှင့် အမြစ်တို့ရှည် ထွက်ရန် အားပြုသည့် ဟောမုန်း ၊aplant [hormone] promoting [elongation] of [stem]s and [root]s (ကြောင်းတူသံကွဲ) indol